Ukuzilungisa kunye nokhathalelo lomzimba kwiGrisi yakudala | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuzilolonga kunye nokunyamekela umzimba kwiGrisi yakudala
Ngokuhambelana nemigaqo yefilosofi yamandulo, eGrisi isimilo sasihamba ngobuhle kunye nokukhathalela umzimba. Ngelo xesha, Isifanokuthi sokuba ngummi olungileyo wayenomzimba okhathalelwe kakuhle kwaye uqeqeshwe kakuhle. Amadoda enza umthambo kangangeeyure kwiindawo zokuzilolonga ukufezekisa ubuhle bamandulo obusekelwe kwimvisiswano nakwimizimba yeembaleki.
AmaGrike, ukongeza ekugcineni imizimba yawo ikwimeko entle yomzimba ngenkqubo yokuzivavanya kakhulu, nayo babekhathalele kakhulu ngococeko lomntu. Emva kokuziqhelanisa nejimnastics, balandela isithethe sokuhlanjululwa kolusu ukuya kwinqanaba lokuguqula isithethe sobuhle sibe yenye yeentsika zenkcubeko yabo, neyaba neziphumo kwenye impucuko.
Kweli nqaku sivavanye kwakhona ukuba ukuzilungisa kunye nokhathalelo lomzimba kwakuyintoni kwiGrisi yamandulo. Ufuna ukwazi okungakumbi? Qhubeka ufunda!
1 Indlu yangasese kwiGrisi yamandulo
2 Iindawo zokuhlambela zoluntu kwiGrisi yakudala
3 Abafazi kwiindawo zokuhlambela zikawonke-wonke zaseAthene
4 Umgangatho wobuhle babasetyhini kwiGrisi yakudala
5 Ukunyamekelwa kweenwele kumaxesha amandulo
6 Ukususwa kweenwele kwihlabathi lamandulo
7 Isiko lokuzilungisa kwezinye iinkcubeko
Indlu yangasese kwiGrisi yamandulo
Siyayixabisa imizobo yee-amphoras ezisaphilayo ukuza kuthi ga kulo mhla amaGrike amandulo ayexhalabele kakhulu ukuba nomzimba olinganayo nolusempilweni, ke baye benza iinkqubo zokuzilolonga ukuze bafumane umzimba ohambelana kwaye mhle.
Kwimidlalo yeembaleki iimbaleki zazingamelwa nje kuphela ukuziqhelanisa nemidlalo kodwa zisenza nesiko lokucoca nokukhathalela umzimba olandelayo. Kwaye zazipeyintwe ngezixhobo zazo zobuhle, umzekelo, izikhongozeli ezincinci ezineoyile enuka kamnandi ezixhonywe ezindongeni okanye zibotshelelwe ezihlahleni zeembaleki.
I-Ash, isanti, ilitye lepumice kunye ne-rose, i-almond, i-marjoram, i-lavender kunye ne-sinamon oyile zazisetyenziselwa ukucoca ulusu emva kokuzivocavoca. njengokucoca into yokuthambisa, iicolognes kunye neziyobisi. Enye into ababeyisebenzisa yayiyi-wand ende ende emile okwecephe ukususa uthuli kunye neoyile eluswini.
Kwimyuziyam yaseGrisi ungabona ezinye iisampulu zeengqayi ezazisetyenziselwa ukugcina ezi zinto kunye neemveliso zokucoca. Yayizizikhongozeli ezenziwe ngodongwe okanye ngealabhasta ezazidla ngokuhonjiswa kwaye zinemilo eyahlukeneyo.
Iindawo zokuhlambela zoluntu kwiGrisi yakudala
Kuyaziwa ukuba iindawo zokuhlambela zikawonke-wonke zazikho eAthene ukusukela kwinkulungwane yesi-XNUMX BC, kwiindawo apho amadoda aya khona emva kokuzilolonga kungekuphela nje ukuze ahlambe kodwa nokuncokola nabanye abasebenzisi, kuba ayejongwa njengeendawo zokuhlangana ezidumileyo.
Iindawo zokuhlambela zikawonke-wonke zeGrisi yamandulo yayizizithuba ezinkulu ezazigcina amakhulu abantu kwaye zahlulwe zaziindawo ezininzi. Kuqala ufikelele kwifayile ye- ifrigidarium (igumbi elinamanzi abandayo ukuhlamba nokususa ukubila), emva koko yayilithuba lokujika tepidarium (igumbi elinamanzi ashushu) kwaye ekugqibeleni baye icaldarium (igumbi elinesauna).
Oogqirha bexesha bacebisa ukuba bathathe amanzi abandayo okuhlamba kuba bahlaziya umzimba nomphefumlo ngelixa iibhafu ezishushu zisetyenziselwa ukwenza ulusu lubonakale luthambile kwaye lumnandi.
Nje ukuba isithethe sokuhlamba siphelile, iiseva zazisusa ubumdaka kulusu lwazo zaza zaxuba zona. Emva koko kungenelele abenzi bobugcisa, abathambisa ioyile eqholiweyo kwimizimba yabo ukuze baphumle izihlunu.
Abafazi kwiindawo zokuhlambela zikawonke-wonke zaseAthene
Kwiindawo zokuhlambela zikawonke-wonke zaseGrisi zakudala zazikhona iindawo ezazenzelwe abafazi kuphela, nangona zazisoloko zihanjelwa ngabantu base-Athene abathobekileyo njengabafazi abakumgangatho ophezulu abahlanjwa emakhayeni abo. Xa behlamba basebenzisa iterracotta okanye iibhafu zokuhlambela zamatye ezazizaliswa ngamanzi ngesandla.
Umgangatho wobuhle babasetyhini kwiGrisi yakudala
Igama elithi cosmetic livela kwelesiGrike elithetha "into esetyenziselwa ucoceko nobuhle bomzimba" ingakumbi ebhekisa ebusweni.
Isimboli yobuhle kubafazi baseGrisi yayiyinto entle engathobekiyo. Ulusu olumhlophe lwaluthathwa njengobungqina bokusulungeka kunye nothando kunye nobomi obutyebileyo njengolusu olucekeceke lwachongwa ngabantu abakumgangatho ophantsi kunye namakhoboka, awayechitha ixesha elide elangeni esebenza.
Ukugcina ulusu olukhanyayo, basebenzise iimveliso ezinje ngetshokhwe, ilothe okanye iarsenic. Babeka i-blush esekwe kumaqunube ezidleleni zabo, nangona yayiyeyona nto ilula kakhulu njengoko ubuhle bendalo babugcwele, ngokungafaniyo nabasetyhini benkampani abasebenzisa imibala engaphezulu.
Ukunyamekelwa kweenwele kumaxesha amandulo
Ke zona iinwele, abesilisa nabasetyhini bathambisa iinwele zabo ngeoyile kwaye bazisonge kuba le ndlela yayijongwa njengeyona nto ibalaseleyo kubuhle ngelo xesha. AmaGrike ayeyithanda intshukumo evakaliswa ngamaza kunye nee curls. Amakhoboka ayephethe ukugcina iinwele zeenkosi zawo zikwimeko efanelekileyo. Ngapha koko, ezinye iinwele ezazinxitywa ngamaGrike amandulo zinokubonwa kwimifanekiso eqingqiweyo esekho nanamhlanje.
Abafazi bamanqanaba aphezulu bahlukile kumakhoboka kwiinwele zabo kuba babenxibe iinwele ezintsonkothileyo kwaye baqokelela iinwele zabo ezinde kwizaphetha okanye ii-braids ezazihonjiswe ngezaphetha kunye neentambo ezincinci. Kuphela ngamaxesha okulila abathi bayisika kancinci. Ngokwabo, abafazi abakumgangatho ophantsi babedla ngokunxiba iinwele zabo ezimfutshane.
Abantwana babevunyelwe ukuba bakhule ngeenwele de kube kwinqanaba lokufikisa, xa babenqunyulwa ukunikela kwizithixo. Amadoda ayesiya kumchebi manqaphanqapha kwaye akazange aqale ukucheba iindevu kunye namadevu de kwasemva koAlexander Omkhulu. Enye into entsha eza nokumkani waseMacedonia ngenxa yokoyisa kwakhe eMpuma yayiyidayi yeenwele.
Kwi-Greece yamandulo umbala omhlophe ubufanekisela ubuhle ngokuzala kwawo. Ukuze afane no-Achilles namanye amaqhawe kwiintsomi zamaGrike, amadoda ayila iindlela zokukhanyisa iinwele esebenzisa iimveliso ezinjengeviniga, incindi yelamuni kunye nesafron.
Ukususwa kweenwele kwihlabathi lamandulo
Ukususa iinwele zomzimba, abafazi basebenzise iireyitha kwaye bathambisa ngeepasta ezikhethekileyo okanye ngekhandlela.. AmaGrike amandulo ayekubona kubaluleke kakhulu ukuzisusa ngokupheleleyo iinwele zomzimba njengoko umzimba owaphukileyo wawungumqondiso wobumsulwa, ulutsha kunye nobuhle.
I-Waxing yongezwa ngokuthanjiswa ngeoyile kunye neziqholo ukuthambisa ulusu. Esi siko senziwa yi-kosmetés kwiindawo zokuzilolonga, ezazithe zangumkhombandlela wabalungisa ubuhle.
Isiko lokuzilungisa kwezinye iinkcubeko
Ngokuoyisa iByzantium, i-Egypt neSyria, amaSilamsi aluzuza njengelifa uthando lwawo lwemithombo eshushu kumaRoma nakumaKristu aseByzantium.
Ngaphambili, kwinkcubeko yamaSilamsi bekucingelwa ukuba ubushushu behammam bonyusa ukuchuma kwaye, ke, ukuzala kwakhona kwamakholwa. Ke ama-Arabhu ayekile ukusebenzisa amanzi avela kwi-frigidarium (igumbi elibandayo) ukuhlamba kwaye asebenzise kuphela i-tepidarium kunye ne-caldarium.
Ke kumazwe aseArabhu, iihammams zazikwindawo ebalulekileyo yokuhlanganisana kwezentlalo bema ke emasangweni amaSilamsi. Ukuhamba kwakhe kubo bekucingelwa ukuba kukuzilungiselela nokucoca ukufikelela etempileni.
Ngethamsanqa eli siko lokuzilungisa elizalwe kwiGrisi yakudala kwaye ligcinwe ngamazwe amaSilamsi lisaphila unanamhla. Kwiidolophu ezininzi kukho indawo zokuhlambela zama-Arabhu apho unokufumana khona eli siko lakudala kulusu lwakho. Isicwangciso esimnandi sokuchitha imvakwemini ngempelaveki, uphumle kwaye uphumle umzimba nengqondo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuzilolonga kunye nokunyamekela umzimba kwiGrisi yakudala
Molo, unjani, kubonakala kuyinto entle kakhulu ukuba nithetha ngale nto
Ikhefu lokuhamba ngeenqanawa: Yenza Onke Amaphupha Akho Azaliseke!